थप हौसला दिने उद्देश्यले १५ जनालाइ एग्रो टाइम्स कृषि अवार्ड वितरण गर्दैछौँ-Setoghar
थप हौसला दिने उद्देश्यले १५ जनालाइ एग्रो टाइम्स कृषि अवार्ड वितरण गर्दैछौँ
प्रतिष्पर्धी बजारलाई चाहिने किसिमको जनशक्ति तथा तिनको तालिम, ज्ञान, सिपलाई उत्पादनमुलक बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै कृषिको दिगो विकास हुन सक्छ भनिरहने एग्रो टाइम्सका निर्देशक अशिम सापकोटा नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरुको उत्पादन बढाउन सके स्वतः नेपाली कृषक तथा बिशेष गरी महिलाको आम्दानी बढाउन सकिन्छ र बढी भएको उत्पादन पनि विश्व बजारमा पनि पुर्याउन सकिन्छ भन्छन् । लामो समयदेखी कृषि विषय केन्द्रीत रही पत्रकारिता गरीरहेका सापकोटा कृषि टेलिभिजन तथा रेडियो मिरमिरेमा समेत कृषिमा अाधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन समेत गरीरहेका छन् । यो बर्ष पनि कृषि क्षेत्रमा क्रियाशिल तथा नेपालको कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरणमा योगदान पुर्याइरहेका फरक बिधाका १५ जनालाई यो एग्रो टाइम्स तेश्रो कृषि अवार्ड २०७५ वितरण गर्न लागेको छ, यहि कृषि अवार्डको सेरोफेरोमा सापकोटासँग हामीले अत्यन्तै संक्षिप्त कुराकानी गरेका थियाैं ।
हामीले बिगत ५ बर्षदेखि कृषि र कृषकमा समर्पित एग्रो टाइम्स मासिक पत्रिका प्रकाशन गरीरहेका छौँ । छैठौँ बर्ष पुग्न थालेको अवसरमा पाँचौ बार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा यो तेश्रो एग्रो टाइम्स कृषि अवार्ड गर्न लागेका हौँ । कृषि क्षेत्रमा क्रियाशिल तथा नेपालको कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरणमा योगदान पुर्याइरहेका १५ जनालाई यो अवार्ड वितरण गर्न लागिएको हो । कृषकहरुलाई थप हौसला दिनको लागि यो अवार्ड वितरण गर्न लागिएको हो ।
बिगतका बर्षहरुमा त अवार्ड वितरणपछि विवादित भयो रे नि त ?
हाहाहा……, खास विवाद नै भन्ने त होइन। यसमा खास केहि व्यक्तिहरु असन्तुष्ट भए होलान् । कुनै पनि अवार्ड तथा प्रतियोगिताहरु केहि मात्रामा विवादित त हुन्छन् नै । यसमा पनि त्यही भयो होला । तर हामीले वितरण गरेका अवार्डहरुमा पनि केही कमी कमजोरी भए होलान् । तर हामीले अवार्ड प्रदान गरेकाहरूकाे कृषि क्षेत्रकाे याेगदान अाज पनि सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले हामी कसैले पनि कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसले त्यो भन्यो त्यसले यो भन्ने साना तिना कुराहरुले असर पार्दैनन् ।
आवेदन पश्चात् के –कसरी छनौटमा लगिन्छ त ?
आवेदन पश्चात् स्थानीय स्तरका विभिन्न संघ-संस्था लगायत सरकारी कार्यालसँग समेत सहकार्य गरी देशभरबाट १०० जनालाई छनौट प्रक्रियामा लगिनेछ । एग्रो टाइम्स कृषि अवार्ड २०७५ को मुल्यांकन समितिले त्यस्ता व्यक्तिहरूकाे छनौट गर्नेछ । कृषि अन्तर्गत जुनसुकै क्षेत्रमा आवद्धले आवेदन दिन सकिनेछ ।